sawehlor: IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း - နေမင်းမောင်
Source : (နေမင်းမောင်)
ဒီနေ့ ဒီ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးဖို့တော့ အတွေးပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ နယ်ပယ်မှာ တကယ်ကို အဆင်မပြေတာလေးတွေကို သွားတွေ့တာနဲ့ လူတိုင်းလုပ်တက်စေဖို့ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ။ တကယ်တော့ သိသွားရင် မခက်ပါဘူး။ မသိခင်တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကို လူတိုင်း သိပြီးသားစကားပါ ။IDM ပြသနာကို တက်လာပြီဆိုရင် လူတော်တော်များများ တွန့်သွားကြတယ်။ဒီပြသနာက တကယ်တန်းတော့ မခက်ပါဘူး. .. ကဲ့ပြောနေတာ ကြာပါတယ်။ ဖြေရှင်းမယ့် နည်းလမ်းတွေ ကြည့်ကြရအောင်...ဒါနဲ့ စကားမစပ် မိသားစုမှာ စာမရေးတာ ကြာပါပြီ ဒီနေ့က စပြီး စာပြန်ရေးပါတော့မယ်။
ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Crack နဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းကို အရင်ဆုံး စြေ့ပာပြပါ့မယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နမူနာ အနေနဲ့ ကျွန်တော် IDM မှာ crack ရော patch ရော.. Keygen ရော ပါတဲ့ ဖိုင်ကို အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ...
အထဲ့မှာ Keygen ,Crack , နဲ့ Patch ဖိုင် အကုန်ပါပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ ၃ ခုလုံးနဲ့ ရှင်းပြတာကတော့ ဒီဆော့ဝဲတင် မဟုတ်ပါဘူး .. ကျန်တဲ့ ဘယ်ဆော့ဝဲမဆို Keygen ,Crack , နဲ့ Patch တွေနဲ့လာရင် ဒီတိုင်းပဲ့ Full version ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ရှင်းပြမှာ ပါ...
အရင်ဆုံး ရမ်းပြီးပြီဆိုရင် Full သုံးလို့ မရဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကီးတွေတောင်းနေရင် IDM မှာ ဒီအပေါ်က ပုံလေးပေါ်နေတာကိုတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် Crack နဲ့ အရင်ဆုံး Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပြပါမယ်။
Crack ဖြင့် Activate လုပ်နည်း..
ဒီကောင်လေးကတော့ IDMan ဆိုတာလေးကို Copy ကူးပြီး ကျွန်တော်တို့ IDM ရမ်းခဲ့တဲ့ Location ထဲ့ကို သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို location လည်းဆိုရင် အောက်မှာ နမူနာ ပြထားပါတယ်
ဒီ IDMan ဆိုတဲ့ Copy ကူးလာတာလေးကို Paste လုပ်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရင်ရှိပြီးသား IDMan ကို ဖျက်ပစ် ပြီးမှ ထည့်လည်း ရသလို မဖျက်ပဲနဲ့ Copy and replace လုပ်လည်း ရပါတယ်။
IDM Cracker tool ဖြင့် Activate လုပ်နည်း..
အဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Start ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ အောက်ညာဘက်ခြမ်းကလို အစိမ်းလိုင်းအပေါ်ထိ တက်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ သူက Activate လုပ်လို့ ပြီးပါပြီဆိုတာကို Box လေးနဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက ပိုလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Patch ဖြင့် Activate လုပ်နည်း...
ဒီနည်းကတော့ အရင်နည်းတွေ အတိုင်းပဲ့ ‘ဒီ Program ရမ်းထားတဲ့ Location ကိုပဲ့ သွားရဦးမှာပါပဲ့... ဒီအောက်က နေရာလေးပေါ့
ဒီနေရာလေးကို ရောက်ပြီဆိုရင် Patch ကို Copy ကူးပြီး ဒီ Location folder ထဲကို ထည့်ပေးပါ။ နောက် ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ ရမ်းပါ။ အောက်ကလို Box လေး တပ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ first name. last name ထည့်ပေးရပါမယ်။ တခုထည့်ပေးပြီးတိုင်း Ok ပေးရပါမယ်။ သူဘာသာ Serials ကိုတော့ ဖြည့်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်က Location ကိုပဲ့ သွားပြီး Paste လုပ်ပေးယုံပါပဲ။ Paste လုပ်ပြီးတာနဲ့ Run as administartor နဲ့ ရမ်းလိုက်ရင် သူ့ဘာသာ Activate လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Keygen နှင့် Activate လုပ်နည်း...
ဒီနည်းကတော့ အဆင်ပြေသွားတာ ရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့အခါတွေလည်း ရှိတာယ်.။ အဆင်ပြေတာတော့ များပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နည်းလေး သိထားရင် အကုန် အဆင်ပြေမယ် မဟုတ်လား... အဲ့တော့ အောက်ကလို ပေါ်နေတဲ့ Box လေးတပ်လာရင် ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ...အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက
Keygen ကို ဖွင့်ရပါမယ်
Keygen ထဲ့က Serials ကို ကူးSerials number ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ပြီး First name last name နဲ့ Email ကိုတော့ ကြိုက်တာ ထည့်ပါ။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Full version ရပါပြီ။
Posted by saw ehlor at 22:57
Labels: IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း